October 2018 – Dhammadīpa
End of Vassa, Abhidhamma Day 2018
Posted on 24 Oct 2018 by Ashin Sopāka
Today, 24 October 2018, is the last day of Vassa, the three month period in which monks and nuns remain in one domicile. On the Burmese calendar, it is also called Abhidhamma Day, the day on which the Buddha descended from Tusita heaven after having spent vassa teaching Abhidhamma to his mother there.
“The wise who are intent on absorption,
who love the peace of renunciation,
even the gods are envious of them,
the Complete Buddhas, those who are mindful.” Dhp 181
“Ye jhānapasutā dhīrā,
Devāpi tesaṁ pihayanti,
“Người trí chuyên thiền định,
Bậc chánh giác, chánh niệm.”
အကြင်ပညာရှိတို့သည် သမထဈာန်၌ လေ့ကျက်အားထုတ်ကုန်၏။
ကာမမှ ထွက်မြောက်မှု ကိလေသာငြိမ်းမှု၌ မွေ့လျော်ကုန်၏။
သစ္စာလေးပါးတရားကို ကောင်းစွာ သိကုန်သော လွန်ကဲသော သတိရှိကုန်သော
ထိုပညာရှိတို့အား နတ် ဗြဟ္မာတို့သည်လည်း ချစ်မြတ်နိုးကြကုန်၏။
Posted in Abhidhamma, Dhamma, Monasticism	| Tagged abhidhamma, buddha, dhamma, vassa, ဝါ, ဥပုလ်
Almsround and Chanting
Posted on 13 Oct 2018 by Ashin Sopāka
“Chanting sacred verses for comestibles
is not done by me;
for those who rightly See, Brahmin,
it accords not with Dhamma.
Chanting sacred verses thus
is rejected by the Buddhas,
such is the Dhamma, Brahmin,
such is their practice.
“A great seer with Final Knowledge, conflicts stilled.
one who has exhausted taints, is wholly free—
make offerings of food and drink to suchaone:
the certain field for one who merit seeks.” – Snp 1.4
“Gāthābhigītaṁ me abhojaneyyaṁ,
Sampassataṁ brāhmaṇa nesa dhammo;
Gāthābhigītaṁ panudanti buddhā,
Dhamme satī brāhmaṇa vuttiresā.
“Aññena ca kevalinaṁ mahesiṁ,
Annena pānena upaṭṭhahassu,
Khettaṁ hi taṁ puññapekkhassa hotī”ti.
ငါ့အား ဂါထာတို့ကို သီဆို၍ ရအပ်သော ဘောဇဉ်တို့ကို စားခြင်းငှါ မထိုက်၊ ဤဘောဇဉ်ကို စားခြင်းသဘောသည် စင်ကြယ်ခြင်းကို ရှုမြင်ကုန်သော ဘုရားရှင်တို့၏ သဘောမဟုတ်၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ဂါထာသီဆို၍ ရအပ်သော ဘောဇဉ်ကို ပယ်တော်မူကုန်၏။ ပုဏ္ဏားအသက်မွေးခြင်း စင်ကြယ်မှုသဘောရှိလတ်သော် ဤတရားသဖြင့် ရှာမှီးခြင်းသည် ဘုရားရှင်တို့၏အသက်မွေးခြင်းတည်း။
နို့ဃနာမှတစ်ပါးသော ဆွမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖျော်ဖြင့်လည်းကောင်း အလုံးစုံသော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံ၍ မြတ်သော သီလစသော ကျေးဇူး အပေါင်းကို ရှာလေ့ရှိသော ကုက္ကုစ္စငြိမ်းအေးပြီးဖြစ်သော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကို လုပ် ကျွေးလော့၊ ထိုကောင်းမှုသည် ကောင်းမှုကို အလိုရှိသောသူ၏ လယ်ယာဖြစ်၏ဟု (ဟောတော်မူ၏)။
“Ta không hưởng vật dụng,
Do tụng kệ đem lại,
Ðây không phải là pháp,
Của bậc có chánh kiến
Chư Phật đều bác bỏ,
Tụng hát các bài kệ,
Khi pháp có hiện hữu,
Truyền thống là như vậy.
“Hỡi này Bà-la-môn,
Người cần phải cúng dường,
Ðồ ăn vật uống khác,
Bậc đại sĩ toàn diện,
Ðã đoạn các lậu hoặc,
Ðã lắng dịu dao động,
Ta chính là thửa ruộng,
Cho những ai cầu phước.”
Posted in Monasticism	| Tagged almsround, chanting, dhamma, pindapata